Si aad u ogaatid mashiinka iibinta noocyo badan - TCN
Si aad u ogaatid mashiinka iibinta noocyo badan
Waqtiga: 2019-06-22 Hits:
Bulshada maanta jirta, xawaaraha nolosha ee degdegga ah, 24-ka saacadood, sheeko-cusub, moodada, caqli iyo baahiyo kaleba waxay noqdeen isbeddellada isticmaalka macaamiisha da 'yarta ah, qaabka iibka tafaariiqda ee adeegga iskiis ah ayaa si weyn loo ixtiraamaa. Mashiinka iibinta ayaa aad ugu habboon baahiyadan. Kuma koobna waqtiga iyo goobta, waxay keydisaa shaqada waxayna fududeysaa macaamilada. Waa nooc cusub oo tafaariiq ganacsi ah, waxayna noqoneysaa marin cusub ee kor loogu qaadayo isticmaalka tafaariiqda.
Cusbooneysiinta ayaa la jaan qaadi karta horumarka waqtiyada, dabcan, mashiinnada iibintu waxay soo saareen noocyo badan ilaa iyo haatan. Qaab dhismeedka, waxaa loo qaybin karaa mashiinka sanduuqa, mashiinka iibinta guga, mashiinka iibinta S-qaabeeya, mashiinka iibinta suunka leh nidaamka kor u qaadida otomaatiga iyo wixii la mid ah. Codsiga, waxaa jira mashiinnada iibinta sharaabka, mashiinada iibinta miraha, mashiinada iibinta qaangaarka, Mashiinada cuntada lagu kariyo, mashiinada cuntada lagu iibiyo, iwm. Qiimaha waxsoosaarka iyo naqshadeynta mashiinada iibinta ee iibiyaasha kaladuwan way kala duwan yihiin, sidaa darteed qiimaha iibinta mashiinnada way kala duwan yihiin. Marka xigta, waxaan soo bandhigi doonaa kala duwanaanshaha qiimaha mashiinnada iibinta iyadoo loo eegayo kala-soocidda dhismaha kanaalka.
Meelaha S-qaabeeya ee mashiinka iibintu waa waddo gaar ah oo si gaar ah loogu talagalay iibinta cabitaannada. Waxay iibin kartaa dhammaan noocyada cabitaannada dhalada ah iyo kuwa qasacadeysan, ballaca godadka waxaa loo hagaajin karaa iyadoo la eegayo heerka cabitaannada. Cabitaannada waxaa lagu dhejin karaa lakabka lakabka lakabka, iyadoo lagu tiirsanaanayo hoos u dhac xoog leh, taas oo aan u horseedi doonin xamuul xamuul iyo heerka isticmaalka sare ee goobta. Awoodda mashiinka wax iibinta noocan ah wey ka ballaaran tahay noocyada kale ee kanaalka iibinta, dib u buuxinta wey fududahay. Waxaa loo tuuri karaa si saf ah, taas oo yareynaysa waqtiga dib u buuxinta, wuxuu leeyahay nolol adeeg oo dheer oo waara. Si kastaba ha noqotee, nooca iibinta noocan ahi wuxuu leeyahay qaab dhismeed adag, kharash badan oo aan sahlanayn in la soo saaro. Guud ahaan shirkadaha ganacsigu ma awoodaan inay soo saaraan. Sidaa daraadeed, qiimaha mashiinka iibinta noocan ahi waa mid aad u sarreeya. Mashiinka wax iibinta yar wuxuu qaataa qiyaastii 10,000 yuan, midka weyn wuxuu ubaahan yahay 20,000 yuan ilaa 30,000 yuan, iyo ama Waxaa jiri doona kala duwanaansho shaashadda, sida: mashiinada shaashadda waaweyn ee taabashada ayaa aad uga qaalisan mashiinada shaashadda yar, laakiin hadhow waa inaad tixgelisaa. Kharashaadka hawlgalka, mashiinnada iibinta noocan oo kale ah waxay leeyihiin cimri dheer iyo heerka guuldarrooyin hoose, ama qiimo aad u sarreeya
Boosaska guga waa kuwa horay ugudhaca mashiinnada wax iibinta. Waxay u isticmaashaa wareegga ilkuhu inay alaabta ka riixaan. Qaab dhismeedka kanaalkani waa mid sahlan, waxaana jira noocyo badan oo badeecooyin yaryar ah oo la iibinayo, sida cabitaannada, cunnooyinka fudud, hilibka degdegga ah iyo baahiyaha maalinlaha ah. Qiimaha waxsoosaarka ayaa aad u yar, laakiin heerka kaarka aad ayuu u sarreeyaa. Cabbirka badeecada saaran dushooda waa inay noqotaa mid adag si waafaqsan xabbadda. Xilliga guga iyo dhexroor cabirka, dib u buuxinta waa in si taxaddar leh loo habeeyaa, xaddiga xamuulka ayaa sii badanaya, dhib badan. Qiimaha mashiinka wax iibinta ee noocan oo kale ah guud ahaan waa inta u dhaxaysa 16,000 iyo 16,000, taas oo kuxiran cabirka mashiinada wax iibinta.
3. Meelaha suunka lagu dhejiyo
Mashiinka iibinta suunka ayaa ah kordhinta boosaska guga. Waxay leedahay xayiraad badan. Waxay ku habboon tahay iibinta mugga go'an, hoose oo ma fududa in la dumiyo. Waxaa loo isticmaali karaa iibinta cuntada baakadaha ku jirta, cabbitaannada gaaggaaban ee dhaadheer, cunnooyinka fudud ee feerka ku jira iyo wixii la mid ah. Dib u buuxinta sidoo kale waa dhib badan. Sida orodka guga, waxay u baahan tahay inay si taxaddar leh alaabada ugu dhejiso mid mid, kaas oo dib u dhigaya waqtiga. Qiimaha mashiinka wax iibinta noocan ah guud ahaan waa in kabadan 20,000, qiimaha mashiinka iibintu wuxuu kuxiranyahay cabirka qaabeynta.
4. Mashiinka iibinta qufulka
Mashiinka iibinta Qufulku waa mashiinka iibinta ugu raqiisan. Waxay iskusoo uruurineysaa armaajooyin badan oo go'yaal ah. Gole kasta oo goonnada goonida ah leh wuxuu leeyahay albaabo gaar ah iyo habka kontaroolada. Gole kasto oo labis ah ayaa kaydin kara hal badeecad oo keliya, laakiin waxay iibisaa alaabo badan oo kaladuwan (baakad la'aan, qaab aan caadi ahayn, cabir weyn, isugeyn xirmo, iwm). Haa, qaab-dhismeedku waa sahlan yahay sicirka waxsoosaarkuna wuu hooseeyaa, laakiin waxa kale oo jira badeecooyin yar yar iyo adeegsiga booska hooseeya. Qiimaha khaanadaha khafiifka ah ee gogosha shaqsiga ah guud ahaan waa 5, kuwaas oo aan loo isticmaali karin kali. Khaanadaha gogosha leh ee nidaamka leh keligood ayaa la isticmaali karaa. Qiimaha mashiinka iibinta noocan ah waa 7,000-8.
5. Boosaska kaladuwan
Mashiinkan leh wiishka tooska ah ayaa waliba leh qalab koronto oo otomatik ah. Waxay iibin kartaa alaabo jilicsan sida badeecadaha dhalada ka samaysan, miraha iyo khudradda, ukunta, cuntada sanduuqa, iwm. Alaab-keeniddu waa mid aad u deggan, alaabtuna iibisay Mashiinka wax iibintu aad ayuu u badan yahay, sidaa darteed cabbirka guud ee mashiinka noocan oo kale ah ayaa isna la isbarbar dhigaa. Dhisme balaaran, qaab dhismeedkiisu adag yahay, qiimaha waxsoosaarka sareeya, qiimaha mashiinka iibinta noocan ah guud ahaan waa 30,000.
HOREWaqtiga mashiinnada iibinta aan la ilaalin ayaa yimid
NEXT Qashinka badda la yaabka leh ayaa nolosheenna liqay